भोलीदेखि उडान बन्द गर्ने निर्णय, कारण यस्तो ! – Sidha Kura
मुख्य पृष्ठ /समाचार/भोलीदेखि उडान बन्द गर्ने निर्णय, कारण यस्तो !
काठमाडौं । सुर्खेत विमानस्थल भोली मंसिर १० गते शुक्रबारदेखि बन्द हुने भएको छ । विमानस्थलको धावनमार्ग मर्मत गर्नुपर्ने भएकाले विमानस्थल बन्द गर्न लागिएको नागरिक उड्डयन कार्यालय सुर्खेतले जनाएको छ ।विमानस्थल बन्द भएसँगै यस विमानस्थलबाट हुने उडानसमेत बन्द हुने भएको छ ।
सूचना अधिकारी कर्णले २०२३ को सुरुवातबाटै ४ वटा जहाजले उडान भर्ने जनाएका छन् । बुद्ध एयरले सन् २०२४ मा थप २ वटा र क्रमश २०२५ र २०२६ मा क्रमश २–२ वटा जहाज थप्ने योजना बनाएको छ । बुद्धले अबको ५ वर्षसम्ममा ८ जहाजले दुर्गममा उडान भर्ने जनाएको छ।
गणतन्त्रमाथि हिमानीकी छोरी कृतिकाको व्यंग्य, राजतन्त्रको तारिफ राजनीति